Maxaad ka taqaan Maxamed Bin Salmaan? Awoodda ka dambeysa Taajka boqortooyada Sucuudiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxaad ka taqaan Maxamed Bin Salmaan? Awoodda ka dambeysa Taajka boqortooyada Sucuudiga
Maxamed Bin Salmaan oo wareysi bixiyay bishan Oktoobar ayaa difaacay tallaabadaas “Anigu iskuma magacaabin qof baddalaya Sucuudiga, waxaan ahay dhaxal sugaha boqortooyada waxaana isku dayayaa inaan sameeyo wixii karaankeyga ah ee ku aaddan xilkeyga” ayuu yiri.
Previous articleKu simaha Madaxweynaha Galmudug ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka oo shir gudoomyey kulankii Golaha wasiirada
Next articleAqalka Wakiillada oo ansixiyay $1.9 trillion, taas oo uu madaxweyne Biden uu ku taageerayo dadka Mareykanka cudurka COVID-19.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya oo ku hanjabtay inay joojinayso Diyaaradaha...